महाँकुलुङमा जनचाहाना बिपरीत केन्द्र निर्धारण गरेर जनप्रतिनिधिहरुले ठूलो गल्ती गरेको नेपाली काँग्रेसका नेता सूर्य कुलुङको आरोप « Kalakhabar
महाँकुलुङमा जनचाहाना बिपरीत केन्द्र निर्धारण गरेर जनप्रतिनिधिहरुले ठूलो गल्ती गरेको नेपाली काँग्रेसका नेता सूर्य कुलुङको आरोप
प्रकाशित मिति : शनिबार, १२ भाद्र २०७८ १२:५६
भदौ,१२ – काठमाण्डौं । नेपाली काँग्रेसका युवा नेता तथा नेपाली काँग्रेस आदिबासी जनजाती केन्द्रिय सदस्य सूर्य कुलुङले सोलुखुम्बु जिल्लाको महाँकुलुङ गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिहरुले जनचाहाना विपरीत काम गरेको आरोप लगाएका छन् । जनतालाई नसोधी हतार हतारमा आफूहरुको मनोमानी ढंगले असुविधा पर्ने ठाउँमा गाउँपालिकाको केन्द्र निर्धारण गरेर ठूलो गल्ति गरेको नेता कुलुङको आरोप रहेको छ । आफ्ना स्वार्थका लागि जनचाहानालाई लत्त्याउदै असुविधा पर्ने ठाउँमा जबरजस्ती केन्द्र निर्धारण भएपछि स्थानीय जनता आन्दोलित हुन बाध्य भएको नेता कुलुङले बताए ।
साउन २ गते यता महाकुलुङमा अहिले सम्म नै निरन्तर रुपमा आम जनताले जनप्रतिनिधि बिरुद्ध आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । अहिलेको स्थानीय सरकार अर्थात जनप्रतिनिधिहरुले बिकासको नाममा बिनाश र व्यापक रुपमा बैधानिक ढंगबाटै भ्रष्टचार गरेको नेता कुलुङले कलाखबरसँग बताए । सामान्य काम उपभोक्ता समिति मार्फत गर्न सकिने भएपनि कमिशन खाने नाममा ८० लाख बनाउदै ठेक्का हालेको नेता कुलुङको भनाई रहेको छ ।
दुई लाख पचास हजारमा काम सकेर ८० लाख पचाएको पनि नेता कुलुङले आरोप लगाए । त्यसको प्रमाण जनता आफैले नै मूल्याङ्कन गर्न सकिने उहाको भनाई रहेको छ । छेस्कामको अल्लो चउरबाट पल्लो चउरसम्म डोजर जोत्न ८० लाख लग्छ ? भन्दै कुलुङले जनप्रतिनिधि र ठेक्दारलाई संकेत गर्दै प्रश्न समेत गर्नुभएको छ । महाकुलुङमा नयाँ योजनाका लागि हालका जनप्रतिनिधिहरुले कुनै बजेट खोजेर ल्याउन सकेको छैन ।
अहिले आइरहेको बजेट त आँखै नदेख्नेले पनि बुझ्न सकिने र पाउनु पर्ने त कुनै पालिका अध्यक्ष नै नभएपनि आफै बजेट आउछ, नेता कुलुङले भन्नु भयो । यदि अहिलेको जनप्रतिनिधिहरुको ठाउँमा आफू भएको भए बजेट खोजेर पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, एयरपोर्ट र कृषि जस्ता महत्पूर्ण योजना ल्याएर चमत्कारी परिवर्तन ल्याउने समेत नेता कुलुङले ठोकुवा गर्नू भएको छ । २०/३० लाख बजेट त ४ पिल ढुंगा किन्नमा नै सकाउछन् । यसरी आफनै आमा बाबु र जनताको रगत चुसेपछि कहाँबाट महाकुलुङमा विकास हुन्छ ? कुलुङले भन्नु भयो ।
अहिले महाकुलुङमा मनपरी गाडीभाडा चलेको छ । महाकुलुङमा कहीँ पन्ध्र सय कतै दुई हजार र अझ काठमाण्डौंबाट महाकुलुङ सम्म पुग्दा पाँच हजार सम्म असुल्ने गर्छन् । यसको विकल्पमा ठाँउठाँउमा काउन्टरको व्यावस्था गरेर नीतिनियम बनाउनुको बदला जनप्रतिनिधिहरु कानमा तेल हालेर बसिरहेको कुलुङको भनाई छ । गाउँपालिका अध्यक्ष सागर किराँतीले भने अहिलेको आन्दोलनको कुनै औचित्य नै नभएको बताएका छन् ।
गाँउसभा र कार्यपालिकाको बैठकले लोकतान्त्रिक र बैधानिक ढंगबाट निर्णय गरि हालको केन्द्र निर्धारण भएको अध्यक्ष किराँतीको भनाई रहेको छ । अहिलेको केन्द्र निर्धारण गर्दा जनतालाई कुनै असहज नभएको किराँतीकोे दावी छ । ३५ रोपनी जग्गा उपलब्ध भएसँगै सर्सिलामा केन्द्र निर्धारण गर्दा अरु पालिकासँग नजिक हुने भएकोले चाँडै नगरपालिकामा परिणत गर्न सकिने र जनतालाई फाईदा नै हुने हिसाबले सबैको सहमतिमा हालको केन्द्र निर्धारण भएको अध्यक्ष किराँतीले बताए ।
स्थानीयहरुले झालझेल र पैसाको लोभमा जनप्रतिनिधिहरु फसेको आरोप लगाएका बेला त्यसको कुनै प्रमाण नभएको किराँतीले बताए । यदि सपुत प्रमाण भएमा प्रत्यक्ष फेस गर्न पनि किराँतीले चुनौती दिए । वास्तविक प्रमाण भेटिएमा जुनसुकै बेला त्यसको सामना गर्न पनि आफूहरु तयार रहेको किराँतले बताए ।
अर्को आन्दोलनकर्ता सिंघ बहादुर कुलुङले आन्दोलन चर्चिदै गर्दा वार्ताको माध्यमबाट निकास निकाल्नुको बदलामा गाउँपालिका अध्यक्ष सागर किराँती फरार रहेको बताए । ६० प्रतिशत जनबस्तिलाई नाघेर सबै जनतालाई असुविधा पर्ने ठाउँमा केन्द्र निर्धारण गरी जनप्रतिनिधिहरुले ठूलो गल्ति गरेको उहाँको भनाई रहेको छ । हाल महाकुलुङमा चर्किरहेको आन्दोलनको नेतृत्व भने स्थानीय अगुवा दुतिमान राईले गर्दै आउनु भएको छ ।
आन्दोलन अगुवाई कर्ताहरुले केन्द्र निर्धारणको विरुद्धमा हालेको रिदमा सर्वोच्च अदालतले १५ दिन भित्र कारण सहित उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ । महाकुलुङ गाउँपालिकाको कार्यलयलाई अहिले सशस्त्र प्रहरीले पहरा दिई रहेको छ । गाउँपालीका अध्यक्ष सागर किराँती पालिका बाहिर भएपछि स्थानीय जनता भने सेवाबाट बन्चित भएका छन् ।